काठमाडौँबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको बसमा चेक जाँच गर्दा प्रहरीको उड्यो होस् ! – My Blog
No Comments on काठमाडौँबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको बसमा चेक जाँच गर्दा प्रहरीको उड्यो होस् !
प्रहरीले कैलालीको अत्तरियाबाट बुधबार ४४९ दशमलव ७७ ग्राम अवैध सुन, नगद ४९ हजार ४०५ सहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । अवैध सुन ल्याइरहेको भने सूचनाका आधारमा खटिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अपराध अनुसन्धान समूह र इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीको संयुक्त टोलीले काठमाडौँबाट महेन्द्रनगरतर्फ गइरहेको ना ८ ख ८३४९ नम्बरको बस जाँच गर्दा उक्त अवैध सुन बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बसका सहजकर्ता कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका भवानी घिमेरलाई ९९ दशमलव ९९ ग्राम सुनका दुई बालासहित रु २६ हजार २०० नगद, एक मोबाइलसहित पक्राउ गरिएको छ ।
← दुई साना छोरा लिएर सुतिरहेकी सबितालाई मध्यरातमा जेठाजुले ढोका फोरेर भित्र पसे अनि….. → काठमाडौँ तारकेश्वरका ४७ वर्षिय पुरुषले किन गरे आफ्नै घरमा देह’ त्याग ?